I-20 Isinyathelo sokwakha isixeko ukususela ekuqaleni-Geofumed
NgoJulayi, 2015 UkuCwangciswa kweziThili
Le nto umqokeleli ukuze abalandeli Uphuhliso lwedolophu kunye noLawulo loMhlaba, ukuba ngaphaya ukutshaya kwizixeko smart ezikhangeleka ngathi ayiyontetho yemihla ngemihla esalatha ukuba singafaki nzima ephakanyiswe ngamanyathelo 20 lula, lo mngeni apho ukubheja amazwe afana eYiputa Equatorial Guinea kwi ngokutsha kwamantloko azo.
Olu xwebhu kuyo ndibhekisa, leyo udibanise uqhakamshelwano ekupheleni lexi uhlaziyo IsiNgesi ebhaliweyo. It Akujongwanga ukuba ibe isicwangciso ukulandela, kodwa kunokuba ikuvumela ukuba ukwazi izinto ezithile eziye ubekho iiprojekthi zokwakha ezi izixeko ezintsha kuwo imbali izenzo kwizixeko zanamhlanje sele phawulwa kwaye waxelisa kwizicwangciso ezintsha yaye ziziphi iinkalo ekufuneka zinikwe ukubaluleka ngakumbi, phakathi kwezinye zinjalo.
Ndiyifingqa amanyathelo angamashumi amabini:
1: Khetha indawo
2: Isiqinisekiso sokunwa kwamanzi okusela
3: Qinisekisa ukunikezelwa kwemali ethembekileyo
Ukuze isixeko sibe nozinzo kwezoqoqosho, sidinga imisebenzi. Ngaloo ngqiqo, inkunzi entsha yeJiputa iveza amathuba angcono kuba amaziko karhulumente aya kutsho kwisixeko esitsha, ngokutsho kukaHerbert Girardet, umbhali wencwadi ethi "Ukudala izixeko ezinzileyo".
Le meko sele yenzekile kwezinye izixeko ezaye zenziwa ukususela ekuqaleni njengoko abaseBrasilia (saseBrazil), Canberra (Australia), Abuja (Nigeria), Ottawa (Canada) kunye New Delhi (India), ziye zasekwa njengenkunzi entsha, nto leyo "Amathuba omsebenzi kunye nokuphuculwa koqoqosho kwimveliso yokuba liziko lesizwe lolawulo".
5: Musa ukuhlasela abemi
I-6: Yenza isicwangciso esiyinhloko
7: Ukudibanisa izithuthi
8: Cinga ukuvalwa kweemoto
9: Yenza i-junk smart
10: Khuphukisa ukuxhumano
I-11: Unxanela ukuba i-carbon neutral
12: Qala kwakhona, ukhohlile iipaki
13: ... kunye nenkcubeko
I-14: Nceda, asisinye isiqithi ngendlela ehlekisayo
Umngcipheko wokuba iidolophu ziqhutywe ukususela ekuqaleni kukuba azinakunikela umsebenzi ofanayo, izindlu okanye ukuthutha amathuba kulabo abafuna ukuhlala kuwo.
Nangona i-anthropologist kwiYunivesithi yaseOxford, uNick Simcik Arese, uthi olu hlobo lwesixeko luphela ubandlululo lweeklasi, kuba akukho zikhetho kulabo abanomthombo ophantsi koqoqosho.
Kungenxa yesi sizathu ukuba iidolophu kufuneka zijoliswe kwiinkalo ezingapheliyo, ezifana nokuhlaliswa koluntu.
15: Yenza ingxelo
I-16: Phatha abasebenzi ngenhlonipho
17: Yakha ngokukhawuleza, kungekukhawulezi ...
I-18: Imfundo yoluntu kubahlali abatsha
19: Ukuba uyakha, baya kuza
20: Yinike igama
Nangona kubonakala kunengqiqo, akukhathazi ukuyigcina engqondweni ukuze kungenzekiyo eyenzekayo kunye nenkunzi entsha yaseYiputa, emva kweenyanga ezine emva kwesaziso sayo, asinalo igama.
Ndincoma ukujonga nqaku yo kuqala, okanye inguqulelo yokuqala kwisiNgesi.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuphefumlelwa - Imizila ye-GIS ubuchwepheshe - iSRI UC lokuqala
Post Next Ukutshintsha data lomhlaba Ngaba intanethi!Okulandelayo "
Iimpendulo ze-2 kwi "20 Isinyathelo sokwakha isixeko ukususela ekuqaleni"
Unokongeza oko ngqo kwiGoogle Earth, eyahlukana ngumbumba kunye nokubonisa indawo ye-UTM.
BRUNO CARRASCO uthi:
Asazi kakhulu ukuqonda, kodwa ndifuna ukunika umzekelo. Na idatha kwi-GPS kwi X = 534787, Y = 9747800 ezinjengezi nemizobo entliziyweni google, ukuba ukungena isidanga, umzuzu, yesibini okanye ngenye indlela, ukuba ndithe na degrees, imizuzu, imizuzwana njengoko inokujikwa ibe X, Siyabonga Y.